Miss Jeunesse World. Iray amin’ireto tovovavy 26 ireto no hisolo tena antsika any andafy • Madagossip
il y a 2 années 2	6.5 K
Hary Yvette sy Jaomatana
Izy no Hary Yvette, mpamokatra fandaharana mikasika ny filatroana sy ny Lamaody. Azo lazaina hoe izy no Tyra Banks antsika malagasy. Anisan’ny mitantana ny fifaninanana Miss Jeunesse Madagascar i Hary Yvette.
Ny Miss Jeunesse Madagascar dia tsy fifaninanana na fandaharana fotsiny ihany fa tetikasa ho fanentanana ireo tovovavy malagasy mba handray andraikitra eo anivon’ny fiaraha-monina.
Mandritra ny fandraisana fitenenana dia angatahina amin’ireo tovovavy 15 ka hatramin’ny 19 taona ireo ny vinavinan’asa kasainy ho atao, ka mahakasika ny sosialy na ny kolontsaina izany. Izay tovovavy mibata ny amboara dia manana herintaona hanatanterahany io tetikasa io.
10-11 juillet : 1er casting (110 personnes), Villa Pradon Antanimena
24 juillet : 2ème casting (53 candidats), Le Pavé Antaninarenina
8 août : 1/2 finale (25 candidats), Espace Yandy By-Pass
Ireo 26 finalistes
Aseho anao ireo tovovavy 26 handray anjara amin’ny Famaranana. Mila ny fanampianao izy ireo. Aza misalasala manao J’aime eo amin’ny sariny raha misy mahafinaritra anao. Tsarovy fa ny safidy (vote) ataonao dia mikaonty 25% amin’ny naoty rehetra. Aza hadino ihany koa manao Partage an’ity lahatsoratra ity, mba ho hitan’ny maro te hanohana ny samy malagasy.
Andao ary (10 pages)
Tagshary yvette jaomatana miss jeunesse madagascar miss jeunesse world
Mandria am-piadanana BEN Madagascar Styliste